तपाईँको चोरऔँला लामो छ कि छोटो ? शरीरका अङ्गले बताउने यी ७ कुरा – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/तपाईँको चोरऔँला लामो छ कि छोटो ? शरीरका अङ्गले बताउने यी ७ कुरा
तपाईँको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सम्बन्ध कत्ति गहिरो हुन्छ भनेर तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणकै लागिः के तपाईँलाई थाहा थियो, तपाईँको चोर औँलाको लम्बाईले गोप्य रूपमा तपाईँको लिङ्गको आकारलाई जनाइरहेको हुन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, पत्यार नलाग्ने शरिरका अंगका बारेमा यी रोचक तथ्य भने अनौठा छन्।पढ्नुहोस्, तपाईँको शरीरको बारेमा यी १० रोचक सम्बन्धः